Yiba Neposi Lokuthola Ngokushesha Ukuphumula - Ezothando Zocansi
Ungaba Kanjani Nokubuyisa Ngokushesha Thumela Ukuhlukaniswa
How Have Speedy Recovery Post Break Up
Ukwehlukaniswa kuletha nobuhlungu obungenakunqotshwa obenza ukuthi umuntu adabuke kakhulu nosizi. Ubuhlungu bokulahlekelwa ngumlingani bungahle buhambisane nemizwa yecala, ukuzibekeka icala, umqondo ongahlelekile kahle, ukudabuka, ukukhathazeka ngekusasa, nokunye okuningi. Izazi zokusebenza kwengqondo eziningana ziyavuma ukuthi ukwahlukana kungumcimbi ohlasimulisa umzimba futhi ukululama kungaba nzima! Ake sibheke ezinye izindlela esingaphulukisa ngazo futhi siqhubekele phambili sisuka ekhefini ngendlela enempilo.
Phula Ukuxhumana Ne-Ex Yakho
Lokhu kuvame ukuba ngenye yezinselelo ezinkulu abantu abaningi ababhekana nazo lapho ubuhlobo buphela. Kunesifiso esikhulu sokukhuluma, ukuthumela imiyalezo, noma ukubuka i-akhawunti yezokuxhumana yomdala. Ukuzitika ngalesi sifiso kungaphazamisa inqubo yokuphulukiswa, kuholele ekuvuleni nasekuphumeni kohlobo lobudlelwano futhi kwenze umuntu angasamukeli isimo njengoba sinjalo. Ngokushesha lapho unqamula ukuxhumana ne-ex yakho, ukuphulukiswa kuzoqala ngokushesha.
Vumela i-Cathartic Expression
Lapho uhlukana nomlingani wakho, awulahlekelwa yibo kuphela kodwa futhi nezinhlelo zesikhathi eside owawuzenze nabo, zikwenza ukhathazeke ngenkathi ubhekene nosizi olukhulu. Lezi zimo eziyinkimbinkimbi zemizwa zidinga ukuboniswa ngokukhala, ukubhala izindaba, ukukhuluma nomngani, ilungu lomndeni, noma othandekayo. Ungabhalela noshade naye incwadi yokuvalelisa uveza imizwa yakho ehlobene nokwehlukana kodwa ungayithumeli kubo. Yonke le misebenzi noma omunye wale misebenzi uzovumela ukubonakaliswa kwe-cathartic okuzosiza ukuphulukiswa kwakho.
Kuyinto evamile ukubuyela emqondweni ukuze uhlaziye futhi uqonde izizathu ngenxa yalokho ubudlelwane obungaphumelelanga. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi lokhu kuhlaziywa kungadala ukucasukela umuntu wakudala noma kuye uqobo, lokhu kungaba yimpilo njengoba kungaholela ekuzisoleni wena noma abanye. Kungcono ukuba nomusa kuwe nakumlingani wakho ngokuzixolela wena ngisho nakubo. Ukuthethelela kusho ukuyeka ukudalwa ngokwakha umbono onempilo maqondana nesimo. Lokhu kunzima kodwa akunakwenzeka.
amathiphu wokulawulwa kwezinwele okuzenzela
Ungasebenzisi Obunye Ubudlelwano Ukubhekana Nokulahlekelwa
Ubuhlungu obutholwayo lapho ubuhlobo buphela buhlungu kakhulu futhi busenza kube nzima ukwamukela ukuthi sebuphelile. Abanye abantu bangabhekana nalobu buhlungu ngokungena kolunye ubudlelwano ngaphandle kokweqa ukulimala nobuhlungu obuvela kobedlule. Lokhu kungabonakala njengokuziphatha okuzilimazayo futhi kufanele kugwenywe. Esikhundleni salokho, umuntu kufanele achithe isikhathi ukuqonda lokho abakulindele kumlingani wesikhathi esizayo futhi asungule isibopho esisha lapho sebelungile.
Into engcono kakhulu ongazenzela yona ngemuva kokuhlukana ukuzinakekela. Ungakwenza lokhu, ngokugcina ukudla okunomsoco, uzivocavoca imizuzu engama-30 kuya kwengama-45, ulale kahle amahora ayisikhombisa kuya kwayisishiyagalombili, uphuza amalitha amane kuya kwamahlanu amanzi, uhlangane nabangane, futhi uhlanganyele ezintweni ozithandayo ukuze ukwazi ukuhlela kabusha umqondo wakho futhi wazi ukuthi ungubani ngaphandle kobudlelwano.
Zama Imisebenzi Esekelwe Emqondweni
amanye amathiphu okukhula kwezinwele
Ukucabanga kusho ukuhlala kulo mzuzu wamanje ngokubandakanya zonke izinzwa zakho kungenza ngisho nomsebenzi owejwayelekile kakhulu uzizwe uzolile futhi uqabula. Ungazama ukuzindla kwengqondo, ukubona, ukuhamba, noma ngisho nokudla.
Thola Usizo Lobungcweti
Ukwehlukana kuyakhathaza ngokomoya futhi kwesinye isikhathi kungadinga ukungenela kochwepheshe abanjengochwepheshe bezengqondo noma udokotela wezifo zengqondo uma kungokuhlangenwe nakho okudlula amandla ethu okubhekana nazo. Esimweni esinjalo, unganqikazi ukuthinta isazi sokusebenza kwengqondo.
Funda futhi: #FeminaCares: Ukuqaphela Ukuphazamiseka Kokudla Kwabesifazane
ukusetshenziswa kwesoda ngesikhumba
ikhambi lasekhaya lokutheleleka kwesikhumba fungal
chaza izingxenye zokuqina komzimba
uwoyela wama-alimondi ulungele ukukhula kwezinwele